Hotline Khabar | News Website गिरिजाबाबुले माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भन्दिनु भोः घनश्याम भुषाल – Hotline Khabar
गिरिजाबाबुले माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भन्दिनु भोः घनश्याम भुषाल
काठमाडौं, ३० भदौ । सबैभन्दा पहिला म स्वर्गीय बीपी कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । स्वयम् बीपीलाई धेरै हिसाबले हेर्न सकिन्छ । आज लोकतन्त्रका कुरा, यसमाथि चुनौतीका कुरा गर्दा बीपी प्रधानमन्त्री भइसकेपछिका भाषणहरु । उहाँ सामन्तवाद, जमिन्दारहरुको राज सामाजिक राजनीतिक हिसाबले उनको वर्चश्वबाट मुलुकलाई अगाडि निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो ।
तर सामाजिक स्थिति, स्वयम् उहाँको पार्टी जमिन्दारहरुबाट यसरी घेरिएको थियोकि त्यो हाम्रो पुराणको हात्ति जसरी गढेको थियो उहाँका खुट्टा त्यसरी गढेको देखिन्छ, त्यो छटपटी देखिन्छ । एक हिसाबले भन्दा त्यतिखेर लोकतन्त्रको समस्या त्यही थियो ।
म यसलाई जोड दिएर भन्दैछु उहाँको पार्टी उदार लोकतान्त्रिक समाजवादी दिशामा जानका लागि तयार थियो कि थिएन ? किन बीपी असफल हुनुभयो ?
महेन्द्रले असफल पारिदिएर वा उनले सपोर्ट गरेर बीपी सफल हुने हो भन्ने मान्यताबाट बीपीको अध्ययन गरियो भने गल्ती हुनेछ ।
मैले यो कुरा दोहो¥याएर तेहे¥याएर किन भनेको हो भने स्वयम् बीपीको पार्टी कस्तो थियो ? त्यही कुरा आज हामी बाँचेकाले नबुझ्ने हो भने हाम्रा पार्टी कहाँ छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने लोकतन्त्रमाथि खतरा पर्छ है भन्ने सन्दर्भसँग यो कुरा गाँस्न चाहेको हुँ ।
उदार लोकतान्त्रिक समाजवाद कति हो कति होइन त्यसमा बहस हुन सक्ला । तर उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई समानतापूर्ण आर्थिक व्यवस्थालेमात्रै टेको दिन सकिन्छ भन्ने कुरा भने विवाद छ, बीपीका बारेमा । समाजवादका बारेमा भने बहस गर्न सकिन्छ । उहाँलाई मैले फेरि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु ।
यो ‘लोकतन्त्रमा चुनौती’ विषयक मुद्दालाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटै व्यक्तिले पनि धेरै कोणबाट हेर्न सक्छ र वैचारिक हिसाबले पनि विभिन्न ठाउँमा रहेका मान्छेहरुले यसलाई विभिन्न किसिमले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यसका बारेमा बौद्धिक, प्राज्ञिक बहस धेरै हुन सक्छ । तर व्यवहारमा क्रान्तिकारी व्यवहार हाम्रो मा्क्सले भनेको छ । यो क्रान्तिकारी व्यवहार केवल भाषणले होइन कि मार्क्सले यसलाई दार्श्निक तहबाट उठाएका छन् । मैले त्यस अर्थमा भन्न खोजेको हुँ ।
क्रान्ति कसरी बाँच्छ भन्दा मेरो निष्कर्ष के छ भने क्रान्तिका शक्तिहरुको जस्तो हालत हुन्छ क्रान्तिको पनि त्यस्तै हालत हुन्छ । फ्रान्सको क्रान्ति, रुसको क्रान्तिलगायतका क्रान्तिहरु, ०७ सालको क्रान्ति । हामी कहाँ ००७ सालको क्रान्ति वस्तुतः कांग्रेस र राजाको एलाइन्समा भएको थियो । क्रान्ति सकियो त्यसपछि तिनीहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ) हरु फुट्दै गए क्रान्ति ओरालो लाग्यो ।
०४६ सालमा हामी एउटै झण्डा बोकेर हिँड्यौं, ०४६ साल सकियो ०४७ को एउटा भाषण, संयोग होला गिरिजाबाबुको सम्झिन्छु मैले । पश्चिमतिर पछिका माओवादीका साथीहरुले उहाँलाई ढुंगामुढा गरिदिए । रोल्पातिर हो क्या हो सायद !
त्यहाँबाट फर्केर माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भन्दिनु भो । म अनेरास्ववियूमा थिएँ । म सम्झिन्छु असाध्यै राम्रो मित्रता थियो हाम्रो । म अनेरास्ववियूको महासचिव थिएँ तर म नेविसंघको महामन्त्री होइन भन्न मलाई मन लाग्दैन थियो, म आफूलाई त्यस्तो सोच्थे । हाम्रोबीचमा त्यस्तो प्रकारको सम्बन्ध थियो ।
तर उहाँ (गिरिजाप्रसाद कोइराला) ले भाषण गरेकै दिन कमसेकम ८–९ क्याम्पसहरुमा झडप भइहाल्यो । त्यसपछि हामी मिल्न सकनौं, एक ठाउँमा उभिएनौं । त्यसपछि माओवादीले ठाउँ पायो । अरुले कसरी ठाउँ पाए र किन पाए यसमा नाम नगनौं ।
म अहिले पनि आफू प्रत्यक्ष संलग्न भएर होला ०४७ सालको प्रजातन्त्र प्रतिक्रियावादी र काम नलाग्ने थियो भन्दिनँ । हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा त्यो सामन्तवादलाई एक हिसाबले त्यसबाट बिच्छेद गरेको थियो । संविधान ती चारवटा धारामा मात्रै सामन्तवाद थियो । नत्र भने त्यो ‘परफेक्टली’ उदार लोकतान्त्रिक संविधाननै हो ।
तर त्यसले आफैभित्रको प्रगतिशीलता पूरा गर्न सकेन । राजाका महत्वकांक्षा, उनलाई लडाउनुपर्ने थियो, भारतका स्वार्थहरु, देशभित्रैका उग्रवादीका स्वार्थहरु थिए । त्यस कारण त्यो संविधान अकालमै म¥यो भन्छु मैले । ०४७ सालको संविधान अकालमा प¥यो । यसो भन्दा फेरि यसलाई नेगेटिभ्ली लिन सकिने कुरा के हो भने त्यतिबेला राजा थिए राजा भएको संविधान कसरी प्रगतिशील हुन्छ भन्ने हुन्छ ।
राजतन्त्र, कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा रहेको भए आजभन्दा धेरै अगाडिनै अझै शान्तिपूर्ण तरिकाले रगत नबगिकन राजतन्त्रलाई बिदा गर्ने थियौं । किनभने त्यस (राजतन्त्र) का इन्ट्रेस्टका कारणले, त्यसभित्रका भ्रष्टाचारका कारणले, त्यसका आर्थिक स्वार्थहरुका कारणले गर्दा लोकतन्त्रसँग त्यो सँगै जानै सक्दैनथ्यो । सँगै जान्थ्यो र उ बुद्ध भएर आउँथ्यो भने के कुरा हुन्थ्यो र ? यसकारण संविधान आफैँमा अकालमा मरेको भनेको हुँ, मलाई लागेको त्यो हो ।
अहिलेको संविधान के हुन्छ भन्दा, यो संविधान जसको हो जसले ल्याएका हुन् तिनको हालत जे हुन्छ यो संविधानको हालत पनि त्यही हुन्छ । आज हामी सत्तामा छौं, र हाम्रा अहंकारले यो संविधानमाथिको हाम्रो दायित्व पूरा गर्ने कुराबाट हामीले तलमाथि गर्यौं भने त्यो क्रान्तिका विरुद्धको तलमाथि हुन्छ ।
अर्को यदि कांग्रेसले संविधान ल्याएको हो भन्छ र यसको जिम्मेवारीबाट तलमाथि हुन्छ भने त्यो क्रान्तिका प्रति उसको इमान्दारिता तलमाथि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
ती अनेक निर्णयहरु, जसमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो त्यसमा संसदमा र बाहिर झगडा गर्छन् । र ती मुद्दाहरु जहाँ तिनीहरु भयंकर झगडा गर्नुपर्ने हो त्यसमा राष्ट्रिय एकता गर्छन । म फेरि पनि भन्छु, राजा, दरबार, त्यसभित्रका अन्तरविरोध, त्यसका स्वार्थहरुबाट हामीले आफूलाई पूर्णरुपले बिच्छेद गर्न सकेनौं । त्यो निरन्तर–निरन्तर रह्यो ।
आज ५० करोडभन्दा माथिको कुनै पनि घोटाला (नीतिगत वा अरु हिसाबले) मा सामान्यतया माथिका सबै नेताहरुको स्वीकृतिबिना हुँदैन भन्नेमा मलाई पूर्वाग्रह छ । अनि यो बाँकी राख्ने, यसमाथि प्रश्न कसैले नगर्ने, अनि हामी कम्युनिस्टहरुले सरकारका पक्षमा यो कुरालाई यथावत राखेर यसलाई नजरअन्दाज गरेर जनजागरण गर्ने, दलाल पुँजीवादका बारेमा एउटा प्रश्न पनि नगरेर कांग्रेसले दुई–दुईवटा जनजागरण गर्ने ? ‘अल्टिमेट्ली’ कसले गुमाउँदैछ भन्दा क्रान्तिका यी शक्तिहरुले गुमाउँदैछन् त्यसर्थ यो क्रान्तिले गुमाउँछ, यसर्थ यो मुलुकले गुमाउँछ ।
‘हाइज्याक’ कसरी हुन्छ सार्वभौमसत्ता ? निर्णय प्रक्रिया पार्टीमा ‘मेकानिजम’ त्यस्तै बन्दै गयो । तल कसले टिकट पाउँछ ? प्रष्ट छ । केही बाँकी छन् लाजकाजले भने पनि अर्को पटकको चुनावमा तिनीहरु घट्ने छन् । हेर्नुहोला घट्ने छन् । यस्तै हो भने अब दोस्रो तेस्रो चुनावपछि भयंकर अपराधको आरोप लगाउन मिल्ने मान्छेहरु संसदमा हुनेछन् (न्यायिक अदालत कुनै दिन खडा भयो भने) ।
अनि यिनीहरुले चुनाव जित्छन्, यिनीहरु नीति बनाउने ठाउँमा जान्छन् । यिनीहरुले कानुन बनाउँछन् । बजेट पनि कानुन नै हो । आमरुपमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा हाल्छन् । अनि हुनुपर्ने निर्णय नहुन दिन र नहुनुपर्ने निर्णय गर्न यिनीहरुको गठबन्धन हुन्छ । माथि यिनीहरु मिल्छन् । लोकमानसिंह कार्की मलाई एउटा बडो उदाहरण लाग्छ । ती कसरी आए ? मैले त्यो अलि नजिकबाट हेरेको मान्छे हुँ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले कुनै बेला लेख्नुहोला त्यो बारेमा । उनी कसरी आए । लोकमानलाई ल्याउँदा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग कसरी भयो । उदाहरणका रुपमा मात्रै भनेको मैले यो फेरि !
अनि उनलाई पठाउँदा पनि कति मान्छेलाई थाहा थियो ? सुशीला कार्कीसँगको झगडामा भनियो, त्यति मात्रै हो ? साच्चै हो, हामीले लोकमानलाई लखेटेको ? सुशीला कार्कीमाथि उनले गरेको षडयन्त्रका कारणमात्रै हामीले उनलाई लेखेट्यौं ? भन्दा म चैँ मान्दिनँ ।
लोकतन्त्रको चुनौती भनेको आजका हाम्रा राजनीतिक पार्टीका स्वरुप, नेतृत्व संरचना, पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका, यसका प्रक्रियाहरु नै हुन्। औपचारिक सभाहरुमा अन्य कुराहरु हुन्छन् । खास, ठोस, मूर्त अभ्यासको कुरा हुँदैन। क्रान्तिकारी व्यवहार के हो र त्यस्तो व्यवहार भएको छ छैन भनेर छलफल हुँदैन। यसरी नै जाने हो भने लोकतन्त्र साँच्चै चुनौतीमा पर्नेछ ।
हामीले खुला अर्थतन्त्र अपनाएका छौं, अर्का्तिर विकासका कुरा पनि गरिरहेका छौं । राज्यका यो चरित्रलाई कायमै राख्ने हो भने यो अवस्थामा कस्तो विकास होला ? राजनीतिक अर्थतन्त्रको आँखाले हेर्ने हो भने आजभन्दा भोलि सुरक्षा बढी खल्बलिनेछ, कानुन उल्लंघन हुनेछ, नागरिक अधिकार खोसिनेछ। यी सबै विषय यथावत् राखेर हुने आर्थिक विकास कस्तो होला ?
अमेरिकाका १ प्रतिशत मानिससँग ९९ प्रतिशत मानिससँगभन्दा बढी सम्पत्ति छ । त्यो १ प्रतिशतको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ । अनि अर्थशास्त्रीहरु आर्थिक संकट छ भनिरहेछन् । यो भनेको के हो ? यो कुरा हामी कहाँ पनि दोहोरिनेछ । क्रमशः हाम्रो पनि संस्कार त्यसतर्फ जाँदैछ । खास समस्यामा नपस्ने तर कार्यकर्ताहरुको ज्यान जोगाउन, छाला जोगाउने बाध्यताले हामीलाई दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थातर्फ धकेल्दै लगेको छ ।
आजको सामाजिक आर्थिक नीतिहरुको आधारभूत विषय भनेको हामी समाजवादतर्फ जाने र समृद्धि ल्याउने भन्ने हो । यो हासिल गर्ने हो भने गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । हाम्रो कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ ।
गाउँबाट विस्थापित भएको काठमाडौं आएक युवा यहाँबाट पनि लखेटिएर अरब नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ५० लाख श्रम शक्ति अरब नजओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा झगडा गर्नुपर्ने केही छैन, असहमति पनि कसैको छैन । हाम्रोजस्तो सानो उत्पादन भएको देशमा जमिनमाथिका यही स्वामित्व राखेर नेपाल कहिले पनि विकासित हुँदैन ।
तर उनीहरुले आज जमिनबाट बाहिर निकाल्न पनि सकिँदैन भने अलि सहकारिताको खेतीलाई अघि बढाउने, उद्योगसँग त्यसलाई जोड्दै मानिसलाई उद्योगमा स्थानमा दिने र त्यसमा काम गर्ने मौका दिनुपर्ने हो । क्रमशः यो एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा जाओस् । २०/२५ वर्षको नेपालका समाजवादी दिशा यही होला भन्ने लाग्छ । कतिपय मार्क्सवादी मेरो आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ । चीन, भारत र संसार कहाँ जाँदैछ, हाम्रो उत्पादनका स्तर के हुँदैछ । यी सबै विषय हेर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यको ग्यारेन्टी गर्दै क्रमशः १५/२० वर्षमा भूममा सार्वजनिक स्वामित्व भनेको कुनै पनि अर्थशास्त्रीले भनेको देखेको छैन ।
क्रान्तिका शक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा आधारभूत विषयमा मिलेर जानुपर्ने हो तर यसमा छलफलै भएको छैन । हामी जब दुईतिहाइ बहुमतको कुरा गर्छाै‌ँ, तब एक हिसाबले अहंकार बोल्छौँ । इतिहासमा कहिले नपछारिएको कांग्रेस पछारिएको छ । जब ऊ बोल्छ हीनताभासले बोल्छ । यसबाट कसेर छलफल चलाऔं । आजै लोकतन्त्र कसैले चाहेर जाँदैन, लोकतन्त्रमाथि खतरा जहिले पनि रहन्छ। यो आजको मात्रै विषय होइन ।
यसर्थ क्रान्तिका शक्तिहरु एकै ठाउँमा क्रान्ति बचाउने नाममा जबसम्म एकै ठाउँमा छन्, तबसम्म क्रान्तिलाई कसैले केही गर्दैन । क्रान्तिका शक्ति फाटेपछि क्रान्तिलाई कसैले बचाउन सक्दैन । त्यसबारे छलफल गरौं । आज बीपी दिवसको दिन ।
(१०६ औं बीपी जयन्तिका अवसरमा गान्धी अध्ययन तथा शक्ति केन्द्र, समता अध्ययन केन्द्रले आइतबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा नेकपा नेता घनश्याम भुषालले व्यक्त गरेका धारणा ।)